आत्महत्यालाईकसरी निरुत्साहित गर्ने ? - A complete Nepali news portal based on news & views
आत्महत्यालाईकसरी निरुत्साहित गर्ने ?
८ भाद्र २०७६, आईतवार ११:३१ August 25, 2019 Sangeeta Aryal
दाङ, ८ भदौ । गत साउन २० गते दाङ जिल्लाका विभिन्न स्थानमा तीन जनाले आत्महत्या गरेको समाचार प्रहरीले दियो । ती तीन घटनामध्ये एउटा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–९ मा र अर्को वडा नं १९ बिजौरीमा थियो । अनि अर्को घटना भएको थियो राजपुर गाउँपालिका–६ गङ्गदीमा ।आत्महत्या गर्ने ती तीनले एकै किसिमको विष सेवन गरेको पत्ता लागेको थियो । सो जानकारी उनीहरुको शव परीक्षण रिपोर्टबाट खुलेको थियो । तुलसीपुर–९ मा ३७वर्षीय मानबहादुर विक, बिजौरीकी ५० वर्षीया बमकुमारी विक र गङ्गदीकी थारू समुदायकी एक २१ वर्षीया युवतीले विष सेवन गरेर आत्महत्या गरेका थिए ।
उनीहरु तीनै जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो । उनीहरुले दिउँसोको समयमा विष सेवन गरेको परिवारले जनाएका छन् । विष सेवन गरेको थाहा पाएपछि अस्पताल पु¥याइएको भए पनि उनीहरुलाई बचाउन नसकिएको चिकित्सकको भनाइ छ । तर, उनीहरुले किन विष सेवन गर्नुपरेको हो भन्ने बारेमा भने केही खुलेको छैन । प्रहरीले यस विषयमा गहन अध्ययन शुरु गरेको जनाएको छ तर कारण भने पत्ता लागिसकेको छैन ।त्यसको तीन दिनपछि अर्थात् साउन २३ गते पनि तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१२ क्वाङीकी १२ वर्षीया चौधरी समुदायकी एक बालिकाले पनि विष सेवन गरेर आत्महत्या गरेको खबर आयो । उनलाई उपचारका लागि राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा ल्याइयो तर बचाउन सकिएन ।
तीमध्ये १३२ झुण्डिएर, ७७ विष सेवन गरेर रहेका छन् । तीमध्ये १११ पुरुष, ९८ महिलाले आफैँले आफैँलाई हत्या गरेका छन् । यसमा बालबालिकाको सङ्ख्या १६ रहेको दाङ प्रहरी प्रमुख बेलबहादुर पाण्डेले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । आत्महत्या गर्नेहरुमध्ये सबैभन्दा बढी जनजाति समुदायका ७४, दलित ५६, क्षेत्री ३७, ब्राम्हण ३०, मुस्लिम १२ रहेको पनि प्रहरीको सो तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । आत्महत्या गर्नेमध्ये धेरैजसो विवाहितको सङ्ख्या देखिन्छ । तथ्याङ्कले १८९ विवाहित व्यक्तिले आत्महत्या गरेको देखाएको छ । त्यसैगरी २० अविवाहित छन् ।
यसरी ज्यान जानेमा ४९।५२ प्रतिशत पुरुष र ४६।९३ प्रतिशत महिला छन् । उक्त सङ्ख्यामा सबैभन्दा बढी झुन्डिएर ६३।०६ प्रतिशत आत्महत्याको सङ्ख्या छ । यसपछि विष सेवन गरेर आत्महत्या गर्ने ३६।१३ प्रतिशत सङ्ख्या छ । आफैँलाई आगो लगाएर, हााफालेर र आफैँलाई गोली हानेर आत्महत्या गरेका समेत घटना भएको पाइन्छ ।हरेक वर्ष आत्महत्याका घटनाहरु बढनु ज्यादै नै दुःखदायी अवस्था हो भन्दै जिल्लामा बढ्दो आत्महत्याका घटनालाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनी यहाँका नागरिकहरुले चासो र चिन्तासमेत व्यक्त गरेका छन् ।व्यक्तिको उच्च महत्वकाङ्क्षा र विभिन्न कारणले तनाव हुने र त्यसपछि ‘डिप्रेसन’ भएका कारण पनि धेरैजसोले आत्महत्या गर्ने गरेको बताउनुहुन्छ, सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रका सदस्य निरा योगी । उनले भने, “सबैको सामूहिक प्रयासले गाउँ तहसम्म विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेर आत्महत्या गर्नु हँुदैन भन्ने खालका कार्यक्रम गर्नुपर्छ ।”
“आत्महत्या आफैँले आफैँलाई हत्या गर्नु हो, यसमा विभिन्न कारण छन् र त्यसमा पनि प्रमुख कारण ‘डिप्रेसन’ नै हो”, डा किशोर खत्रीले भने । उनि यस्ता व्यक्तिलाई समयमै उपचार र जीवनबारे बुझाउन सकिएमा आत्महत्याका घटनामा कमी आउने बताए ।आत्महत्या न्यूनीकरण गर्न सचेतना कार्यक्रम विभिन्न विद्यालय, गाउँ–टोलमा लैजान सबैकोे सहयोग आवश्यक रहेको बताए, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–५ का वडासदस्य सावित्रा गुरुङ । उहाँले आत्महत्या विभिन्न कारणले हुने गरेको भन्दै अब कारण पहिचान गरी यसलाई निरुत्साहित गर्नेतर्फ सबै लाग्नुपर्ने र वडास्तरबाटै जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने कार्ययोजना बनाइरहेको उनले बताए।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले आत्महत्या विभिन्न कारणबाट हुने गरेको भन्दै आत्महत्या न्यूनीकरण गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । उनले आत्महत्यालाई निरुत्साहित गर्न मनोसामाजिक परामर्श गर्नुपर्ने बताए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक बेलबहादुर पाण्डेले गरीबी, कमजोर मानसिकता, चिन्ता, भय र उच्च महत्वकाङ्क्षा व्यक्तिमा भएका कारण त्यो पूरा नहुँदा निराशा भएर आत्महत्या हुने गरेको अनुसन्धानले देखाएको बताए ।